Uthotho lokujonga iliso kwi-Accu-yegazi yeGlucose-iSinocare
Inkqubo yokusebenza esebenziseka lula
Akukho khowudi kunye nokukhutshwa komatshini wokuvavanya ngokuzenzekelayo
Inkqubo yokubeka esweni i-Safe-Accu yeGlucose yokuGada ibandakanya: i-Safe-Accu yegazi yeswekile yegazi, Umtya wovavanyo olukhuselekileyo we-Accu yegazi, isisombululo solawulo lweswekile yegazi NCEDA QAPHELA: Isisombululo solawulo lweglucose sinokukhetha.
Inkqubo yokubeka esweni i-Safe-Accu Blood Glucose Monitoring yenzelwe umlinganiso wobungakanani beswekile kwiisampulu ezintsha ze-capillary yegazi ethathwe eminwe nakwisampulu yegazi elipheleleyo. Inkqubo yokuJonga iGlucose yeGlucose isetyenziselwa ngaphandle komzimba kuphela (in vitro diagnostic use) ukuzivavanya kunye nokusetyenziswa kobungcali njengoncedo kulawulo lwesifo seswekile.
Inkqubo yokujonga eswekile yegazi ekhuselekileyo ye-Accu yenzelwe ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela kwaye isetyenziswa ngokubanzi ekubekeni esweni iswekile yegazi. Yenzelwe ukuba isebenze ngokulula, ilungele kwaye kufuneka kuphela umthamo omncinci wesampulu yegazi. Zonke ezi zinto ziluncedo zenza ukuba ibe sisixhobo esweni sokujonga eswekile yegazi.
Ixesha lokulinganisa 10 ± 1 imizuzwana
Imitha yokugcina / imeko yokuhamba -20℃~ 55 ℃
ubunzima malunga neXXUM
Power umthombo 3V DC (CR2032) iqhosha leseli
Ixesha lenkonzo yebhetri Inkxaso yokuvavanywa kwamaxesha ayi-1000
Imemori Iziphumo zovavanyo lweglucose yegazi
Imeko yokusebenza 10 ~ ~ 35℃; Iipesenti ezingama-80 zeRH
Ukuchaneka: iziphumo zovavanyo lwe-Safe-Accu zifezekisa le mfuno ingezantsi:
<5.5 mmol / L (100 mg / dL) I-SD <0.34mmol (6.0mg / dL)
25.5 mmol / L (100mg / dL) I-CV <6.0%
Iinkcukacha ezithe vetshe nceda ufunde i-Safe-Accu yeglucose test test package insert.